China Flour hwokugaya hwakabvira Equipment Factory, Flour hwokugaya hwakabvira Equipment nokutengesa
Chibage Hupfu Mill
Gorosi Flour Mill
Hupfu Blending Project
Hupfu hwokugaya hwakabvira Equipment
Zviyo Kuchenesa Midziyo
Mbeu Kuchenesa Midziyo
Zvokuimba Kuendesa Equipment
Kufuridzira uye Pneumatic Inoratidzira Midziyo
Magetsi Roller Mill
Iyo pneumatic roller mill ndiyo yakanaka yekugaya zviyo muchina wekugadzirisa chibage, gorosi, durum gorosi, rye, bhari, buckwheat, mhunga nemumera.
Iyo yemagetsi chinotenderera chigayo chiye chakakodzera chiyo chekugaya muchina wekugadzirisa chibage, gorosi, durum gorosi, rye, bhari, buckwheat, mhunga nemumera.
Semushini wepuraimari wekusefa muchina, iyo mapurift inokodzera vagadziri veupfu vanogadzira gorosi, mupunga, durum gorosi, rye, oat, chibage, buckwheat, zvichingodaro.
Hupfu hwokugaya midziyo Tupukanana Muparadzi
Hupfu hwokugaya midziyo zvipembenene muparadzi zvinonyanya kushandiswa muzvigadzirwa zveupfu zvemazuvano kuwedzera kuburitsa hupfu nekubatsira chigayo.
Iyo yekukanganisa detacher inogadzirwa zvinoenderana neyedu yepamusoro dhizaini. Iyo yepamberi yekugadzirisa muchina uye hunyanzvi hwakavimbisa iyo inodikanwa chaiyo uye chigadzirwa mhando.
Hupfu hudiki chigayo Plansifter
Hupfu hudiki chigayo Plansifter yekusefa.
Yakavhurika uye yakavharwa mupurani dhizaini aripo, Kuti uzere uye upatsanure zvinhu zvinoenderana nechetere saizi, Inoshandiswa zvakanyanya muupfu weguyo, mupunga wemupunga, chigayo chekudya, Inoshandiswawo muChemical, Medical, uye Mamwe maindasitiri.
Mono-Chikamu Plansifter ine compact dhizaini, kurema uremu, uye nyore kuisa uye kuyedza inomhanya maitiro. Inogona kuziviswa zvakanyanya mumazuvano eupfu zvigayo zvegorosi, chibage, chikafu, uye kunyangwe makemikari.
Mapatya-chikamu plansifter imhando yeinoshanda furawa yekugaya michina. Inonyanya kushandiswa kukamura kwekupedzisira pakati pekusefa neplififter uye hupfu kurongedza mumafurawa eupfu, pamwe nekupatsanurwa kwezvinhu zvinopwanya, hupfu hwegorosi hwakakora, uye zvigadzirwa zvepakati nepakati.
Hupfu Mill Equipment - munatsi
Hupfu chigayo chinonatsa chinoshandiswa zvakanyanya mumazuvano eupfu zvigayo kuburitsa hupfu nemhando yepamusoro. Yakabudirira kushandiswa kuburitsa semolina furawa mu durum furawa zvigayo.
Semuchina wekugaya zviyo, yedu SFSP yakateedzana sando chigayo inogona kupwanya mhando dzakasiyana dzezvinhu zvakagadzirwa sechibage, mhunga, gorosi, bhinzi, yakapwanyika soy bhinzi pulp keke, zvichingodaro. Iyo inokodzera maindasitiri senge furu yekugadzira uye mishonga kugadzirwa kwehupfu.
Mupedzisi we bran unogona kushandiswa sedanho rekupedzisira rekurapa bran yakaparadzaniswa kumagumo kwetambo yekugadzira, ichiwedzera kudzikisira hupfu mu bran. Zvigadzirwa zvedu zvine hushoma saizi, yakakwira kugona, kushomeka kwesimba kushandiswa, mushandisi-inoshamwaridzika mashandiro, nyore kugadzirisa maitiro, uye kugadzikana kuita.
YYPYFP Series Pneumatic Roller Mill
YYPYFP akateedzana pneumatic roller mill compact compact ine yakasimba simba, kugadzikana kuita uye yakaderera ruzha, oparesheni iri nyore nekugadzirisa kuri nyore uye yakaderera kutadza chiyero.
Kero: Poliu Quliang Industrial Dunhu Xinmi Guta
Runhare: +86 13633846327
Hupfu hwokugaya hwakabvira
Hupfu chigayo michina sikuruwa conveyor Mune furawa chigayo ...
Hupfu Mill Dyara Plansifter Muchina / Plansifter Kune Mupunga ...
FSFG akateedzana plansifter anoshandiswa zvakanyanya muazvino furawa chigayo chirimwa uye ri ...
Dombo-kubvisa maitiro muupfu weguyo
Mune chigayo cheupfu, maitiro ekubvisa matombo kubva mugorosi ari ...
Indasitiri yezvikafu indasitiri yeshongwe yehupfumi hwenyika yeChina, ...